I-Semalt Yabelana Ngeyona ndlela engcono kakhulu yokweqa idatha kusuka kwiwebhusayithi
Ingqungquthela iyinhlangano ewusizo futhi enamandla . Kungenza nokwenza ngcono imizamo yakho yokususwa kwedatha ezingeni elilandelayo. I-Octoparse iza kokubili kumahhala namahhala. Ngenguqulo yayo yamahhala, ungakwazi ukuvula amakhasi angaba yizinkulungwane eziyisihlanu zewebhu ngokushesha.
I-Octopus iqoqa futhi ilandele idatha esuka ku-intanethi futhi inabasebenzisi abangaba ngu-150,000 emhlabeni jikelele - vendita caminetti bioetanolo online. Kusukela ngo-2014, i-Octoparse inikeza izinsizakalo zedatha yenkampani ephezulu futhi izama ukwenza ngcono lapho kunesidingo khona.
Idatha ivame ukutholakala kuyi-Inthanethi kwifomu engakhiwe. Nge-Octoperse, awukwazi nje ukukhipha idatha yakho kuphela kodwa futhi ungayilungisa kahle. Ulwazi olutholakalayo lungahunyushwa ngolwazi olubalulekile, ngenxa yoNgqungquthela yokwenza kube lula. Ezinye zezici zayo ezihlukile zibalulwe ngezansi.
1. Okuhle kwabangewona uhlelo
Okwedlule kwenza kube lula kuwe ukukhipha idatha kusuka ku-inthanethi ngaphandle kwamakhono okuhlela. Leli thuluzi lifanelwe kokubili okungewona amakhodi kanye nabangewona uhlelo futhi likhiphe ngokuzenzakalelayo okuqukethwe kwewebhu kusuka kokubili amasayithi ashukumisayo futhi ayisisekelo. Ngaphezu kwalokho, kusenza sikwazi ukugcina idatha ngendlela ehlanzekile, ehlelekile. Nge-Octoperse, ungakwazi ukuvula kalula idatha kuma-API wangokwezifiso futhi uthole imiphumela oyifunayo.
2. I-Octoparse njengesevisi yefu:
I-Octoparse iyinhlangano yesikhulumi esisefu-lombhalo esusa amakhasi amaningi wewebhu ngehora futhi yenza imiphumela oyifunayo, ugcine isikhathi sakho namandla. Awudingi ukukhathazeka mayelana nokulinganiselwa kwe-hardware ngoba leli thuluzi aludingi ukugcinwa futhi lingenza umsebenzi walo njalo.
3. Qaphela amanani nge-Octopus:
Esinye sezici ezihlukile kakhulu ze-Octoperse ukuthi ikusiza ukuqapha amanani nokuqhathanisa imikhiqizo ehlukene. Kuyifanele ukuthenga amawebhusayithi njengama-Amazon ne-eBay futhi uthola idatha kusuka kusayithi lakho lomncintisana kalula. Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi lishaya idatha yesikhathi sangempela ngokuchofoza okumbalwa futhi kusindisa isikhathi esiningi.
4. Ukukhiqiza izinkomba:
Nge-Octoperse, ungakwazi ukudala ukuhola nokwakha uhlu lwakho lokuthengisa ngemizuzwana. Awudingi amakhono okuhlela ngoba u-Octopus uzokhipha inani elikhulu lemininingwane ngokuzenzakalelayo. Izokusiza ukukhuthaza noma ukukhangisa umkhiqizo wakho ngendlela engcono. Nge-Octoperse, ungathuthukisa amasu akho wokuthengisa futhi ungenza izinqumo ezingcono nokubikezela.
5. Kuhle abafundi nabafundisi:
Abafundi nabothisha bahlale bedinga idatha enembile ukuze baqhube uphenyo lwabo. Nge-Octoperse, ungabhala amakhasi amaningi wewebhu ngangokunokwenzeka futhi ungathola ulwazi kusuka ebooks nasezincwadini kalula. Kuzokusiza ukuthi uthole idatha enenjongo futhi engahlehlwanga ngesikhathi.
6. Isixhumanisi se-Point-and-Click:
I-Octoparse iyaziwa kakhulu nge-point-and-click interface yayo. Ubuchwepheshe bayo bokufunda umshini obuphambili bubeka idatha kanye ne-scrapes idatha ngokuchofoza okumbalwa nje. Udinga nje ukugqamisa idatha oyifunayo noma ufaka i-URL yewebhusayithi bese uvumela uNgqongqoshe enze umsebenzi wakhe. Izosingatha yonke imisebenzi embi ngemuva kwesikrini.
7. Iziphesheli nazo zonke izinhlobo zamawebhusayithi: